Ukunisela | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izinzuzo zokusebenzisa ukuchelela kokunisela emakhayeni abo asehlobo
Kunezizathu eziningi zokuthi abalimi abathandi noma bangakwazi ukuthenga izinhlelo zokunisela ezenziwe ngomumo zemifino nezitshalo zokugcina izithombo. Ezimweni ezinjalo, ukuchelela uketshelwa kwenziwa ngesandla ngezindlela umuntu ohlala kuzo ehlobo ekhona. Ngempela, kusayithi lakho ungathola izinto ezanele kanye nezingxenye zalokhu.
Ipompi yombhoshongo wokunisela iyisidingo esiyimfuneko kakhulu se-hydraulic ezweni e-dacha, lapho kungekho khona amanzi okuvela emgodini wokuhambisa amanzi. Uma ukugeleza okuzenzekelayo kwemibhede nemibhede yemifucuko kubuye kuhambisane nawe, ngezansi uzofunda konke mayelana nokuthi ungakhetha kanjani amaphampu ukuphuzisa ingadi kusuka emgqonyeni.
Izimfihlo zokwenza ukunisela ukuchelela emabhodleleni epulasitiki ngezandla zabo
Isistimu yokunisela yokugcoba ivumela ukuchelela kwezitshalo ngezansi kwempande ngokwayo. Ukuchitha isikhathi esincane, ungahlanganisa uhlelo olunjalo ekhaya, ngaphandle kwesidingo sokuthenga izingxenye ezibizayo. Uma ukunisela, ukunisela ukuphuzisa kusuka amabhodlela eplastiki, okwenziwa ngezandla zakho, kuzosebenza iminyaka eminingana.
Ukukhetha ama-sprinklers wokunisela insimu
Noma iyiphi i-dacha icebo lapho izithelo, imifino nezinye izitshalo zikhula zidinga ukuchelela. Esihlokweni sethu sizochaza ukuthi singakhetha kanjani amafafaza ngokuchelela ensimini, sizochaza izinhlobo eziyinhloko zamadivayisi. Incazelo jikelele kanye nenhloso yamadivayisi Kuye ngokuthi kunisela isiphi isitshalo nezitshalo okufanele kwenziwe, kubalulekile ukukhetha i-sprinkler efanele.
Ukuphuza insimu ngesistimu yokunisela "Drop"
Ukuze uthole isivuno esicebile, ngenkathi singenzi isayithi amahora angu-24 ngosuku, ukuphuza izitshalo, izinhlelo zokunisela ezikhethekile zenziwa engadini. Okuthandwa kakhulu phakathi kwabo ukuklahla kwe-drip. Esihlokweni sethu, sisebenzisa isibonelo sokwakhiwa kwe- "Drop", sizochaza ukuthi yimuphi lokwakha nokuthi kungani kuyadingeka.
Izinzuzo zokusebenzisa i-timer yokunisela engadini
Abanikazi abaningi basebenzisa isikhathi esiningi ekuphuzeni izitshalo, kanti basebenzisa amanzi amaningi kunokuba izitshalo zidinga. Ikakhulukazi kunenkinga yokukhiqiza ukudelela okujwayelekile okuvela ezindaweni ezihlala ekhaya nasemasimini. Ngokwezinhloso ezinjalo kwakhiwa isidingo sokunisela okukhethekile, esizoxoxa ngakho kulesi sihloko.
Indlela yokwenza i-reel ye-hose yokunisela yenza ngokwakho
Lapho kufika ukushisa kwezinsuku zasentwasahlobo, abalimi baqala isikhathi esisebenzayo sokutshala nokuphuza, kanye nokulungiselela nokuhlola yonke imishini edingekayo. Kubalimi abathile, ukukhumbula nje ukuthi kunzima kanjani ukuphazamisa i-hose yokuchelela kubangela ukwesaba. Ukuxazulula le nkinga kuzosiza i-reel ye-hose yokunisela.